Magaalo Ka Mida Somaliland Oo Aan Laga Aqoon Liisanka Wadista Gaadiidka Iyo Wasaarada Hawlaha Guud Oo Ku Fashilantay. | Berberatoday.com
Magaalo Ka Mida Somaliland Oo Aan Laga Aqoon Liisanka Wadista Gaadiidka Iyo Wasaarada Hawlaha Guud Oo Ku Fashilantay.
Ceerigaabo(Berberatoday.com)-Mid ka mid ah Magaalooyinak Dalka Somaliland ayaan haba yaratee laga aqoon isticmaalka ama qaadashada Kaadh Aqoonsiga Wadista Gaadiidka Noocyadiisa kala duwan.
Magaaladan oo ah mid ka mid ah caasimada Mid ka mid ah Lixda Gobo lee Somaliland ayaa waxa dadka halkaasi ku nool ay sheegeen in aan laga aqoonin qaadashada Liisanka Wadista gaadiidka.
Ciidamada nabadgeliyada wadooyinka ee magaaladda Ceerigaabo ayaa shalay xabsiga u taxaabay dirawaladda gaadiidka yar yar ee loo yaqaano Bajaajta, ee ka dhex shaqeeya magaaladaasi.Taliyaha qeybta booliska ee gobolka Sanaag Gaashaanle C/casiis Sheekh Ismaaciil, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dirawaladda gaadiidkaasi Bijaajta ee ay soo xidheen aanay lahayn lambarkii baabuurta, isla markaana aanay haysan liisanka wado marista Somaliland.
“Waxay ciidanka nabadgeliyada wadooyinku soo xidheen gawaadhida loo yaqaano Bijaajta, ka dib markii ay magaaladda Ceerigaabo wadooyinkii ku bateen. Waxaa yimid gawaadhida Bajaajta, taas oo dhaawicii iyo dhibaatadii ay dadka u gaysanayeen sii koradhay. Waxa kale oo siyaaday khaladka ay jidadka ku maraan oo sababi karta shilal badan,”ayuu yidhi Taliyaha qeybta booliska Sanaag.
“Maanta (shalay) oo u danbaysay wax bay jiidheen, maalin aan dacwad la nooga keenin ma jirto. Ka dib waxaan amar ku bixiyay in la soo xareeyo wax alaalle wixii Bijaaj ah ee bilaa sharciga ah. Waxaa ku jira qaar aan lahayn-ba bilaydh lambarkii oo ay wataan ciyaal yaryar oo qayrul-masuul ah, sababtaas ayaan u soo xidhnay. Waxaanan doonaynaa in aanu sharciga waafajino, oo ay dhamaantood noqdaan qaar sharciga u hogaansama, oo liisan leh oo lambar leh, oo shuruudaha wado marista fuliyay,”ayuu yidhi Gaashaanle C/casiis Sheekh, waxa uu digniin u diray dadka ganacsatadda ah ee doonaya in ay la soo degaan ama soo iibsadaan Bijaajta,waxaanu yidhi “Waxaan uga digaynaa dadka doonaya in ay gaadiidka Bijaajta la soo dagaan ee bilaa liisan doonaya in loogu wado in sharciga aanu waa fajin doono.”
Dhinaca kale dirawaladda gaadiidka Bijaajta ee la soo xidhay ayaa iyaguna beeniyay eedaha loo soo jeediyay. Waxaanay ku doodeen in liisanka wado marista wadooyinka aan laga qaadan magaalada Ceeerigaabo. Waxaanay ka dalbaday wasaaradda hawlaha guud iyo guriyaynta ee ay khusayso arrintaasi in ay keento magaalada Ceerigaabo liisanka wado marista wadooyinka.